Fantaro ny FJKM – FJKM Ambavahadimitafo Fantaro ny FJKM |
Fantaro ny FJKM
Ireto aloha misy fanafohezan-teny tsara ho fantatra :
TPM = Toeram-Panomanana Mpitandrina ;
IFRP = Institut de Formation et de Recherches Pédagogique ;
PE = Poste d’Evangélisation, saha vaovao ;
MF = Mpiandraikitra Foibe ;
SL = Synoda Lehibe ;
SP = Synodam-Paritany
A- Nitatra ny asantsika :
1. fanamaroana isa ny mpiasa :
– nampitomboina ny isan’ny mpampianatra matihanina teo amin’ny TPM.
– niezaka nampitombo ny isan’ny mpianatra niditra amin’ny TPM isika (80 ny isan’ny nivoaka).
– nezahina nasiana Prezida Synodaly ny Synodam-Paritany rehetra.
– naniraka mpitandrina 55 miasa eny anivon’ny saha PE 55 isika.
– nosokafana ny sekoly fanomanana mpampianatra eny Andohalo (Institut de Formation et de Recherches Pédagogique).
2. Nohatevenina sy nohatsaraina ny fanofanana ireo tompon’andraikitra samihafa.
– nataontsika ho zava-dehibe ny fanofanana ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fahaiza-manao. Hita taratra izany eo amin’ny TPM sy ny IFRP omena toerana lehibe ny laïka mba hanovo fahalalana eny anivon’ireo seha-piofanana samihafa : SEFALA, SETELA ; Misy ny bokim-piofanana iraisana amin’ireny : taona I ka hatramin’ny taona III (mpitoriteny, mpiandry).
– ny mpitandrina sy ny katekista dia omena fiofanana isaky ny 2 taona. Ny vahoakan’Andriamanitra tsotra dia manovo fahalalana sy fitaizana eny anivon’ny sampana sy sampanasa ary asa eny amin’ny fitandremana.
3. Nitatra ny asa sy ny saha. Rehefa nitombo ny isan’ny mpiasa ary nomena izay te handray andraikitra dia niaraka amin’izany koa ny asan’ny FJKM sy ny saha hiasany.
– vokatry ny fahamaroan’ny mpianatra navoaka teo amin’ny TPM isan-taona (80) dia afaka nanitatra saha vaovao maro sy haingana isika. Misy PE 55 manerana ny Nosy : PE saha vaovao, saha matanjaka fa mihamalemy (Atsimo Atsinanana : Vohilava, Ambalavao), saha anjakan’ny Silamo (Analalava, Mitsinjo, Soalala). Ny ankamaroan’ireo PE anefa dia tena ireo saha vaovao mihitsy. Tato anatin’ny 3 taona, ohatra, dia niorina ireto : Manja, Morombe, Betioky, Bezaha, Benenitra, Ivohibe, Iakora, Vondrozo, Vangaindrano, Befotaka, Midongy Atsimo, Vohipeno, Amborompotsy, Ambatofinandrahana, Malaimbandy, Ikalamavony… Fivondronana 3 sisa no tsy misy FJKM dia Beroroha, Beloha Androy, Tsihombe, Fiangonana vaovao miorina isan-taona, 15-20 avy amin’ny AFF (tsy ao ny naorin’ny SP).
– vokatry ireny fitaran’ny asantsika amin’ny alalan’ny PE ireny dia miorina ny SP 3 vaovao izay ny fikambanan’ireny PE vaovao ireny no niteraka SP vaovao dia Toliary, Ambovombe Kristy Ranovelona, Fahazavana atsimo andrefana.
– nitatra hatrany ivelany ny fiangonantsika : Frantsa, Suisse, La Réunion.
– vokatry ny IFRP dia afaka naniraka mpampianatra vita fiofanana isaky ny roa taona. Velona indray ny sekoly. Tsara ny vokatra.
B- Mamelon-tena isika amin’ny fampandehanana ny asa amin’ny ankapobeny
Mivelona amin’ny finoantsika sy ny herin’ny tenantsika ary ny ezaka ataontsika tsirairay isika. Tsy misy izany hoe fanampiana mihoampampana mitobaka avy any ivelany. Amin’ny ankapobeny dia toy izao ny fanazavana tsotra sady fohy ny fomba fidirana sy ny fivoahan’ny vola ampiasain’ny foibe FJKM :
1. Azo sokajiana ho 4 loha ny fomba fidiran’ny vola :
– adidy	55,03%
– Fiangonana mpanampy	17,45%
– hofantrano	24,17%
– hafa	3,15%
2. Ny fomba fivoahan’ny vola dia nosokajiako ho 5 loha :
– fivelomana sy tombontsoa ho an’ny mpiasa iombonana (fanafody, vary, saram-pianarana) 42,28 %
– TPM / IFRP (bourse, fanafody, saram-pianarana) 17,25 %
– hafa (fanofanana, fivoriana, fivezivezena, fifandraisana, banky, latsakemboka) 17,17 %
– fikojakojana (trano, fiara) 12,25 %
– hetra sy haba 10,87 % 3. Ny ezaka sy ny fiaraha-mientana ataontsika no ahafahana mampandeha ny asa sy mandroso. Mifampiankina ny fanohanana ny asa sy ny vokatra mety ho azo.
– ny rakitra, adidy ataon’ny kristianina no ahafahan’ny fitandremana mampandeha ny asa.
– ny adidy aloan’ny isam-pitandremana kosa no ahafahan’ny SP mampandeha ny asa
– ny adidy aloan’ny SP, Fiangonana mpanampy no ahafahan’ny Foibe mampandroso ny asa. Mifampiankina ireo. Tsy afaka hiatrika ireo asa tokony hosahaniny mivantana ny Foibe toy ny TPM, IFRP, PS, PE, fanokanana, fitsidihana, jobily, fitokanana, fanofanana. Tsy mety ilay hoe : omena Mpitandrina izahay na tena mila PE nefa izy tsy manao ezaka hanohanana ny asa iombonana. Misaotra an’Andriamanitra isika fa na eo aza ny fahasarotan’ny asa, ny hamafisan’ny asa, ny fahasahiranana mety misy dia feno fahavononana tokoa ny mpiasa irahintsika miparitaka eran’i Madagasikara : mampianatra amin’ny TPM, PS, PE.Mila tohanana ny hafanam-pony.
D- Mirotsaka an-tsehatra eo anivon’ny firenena isika
1. Misy asa vavolombelona ataontsika eo anivon’ny firenena
Manao izany ny foibe amin’ny alalan’ny SAF. Tsapa fa tena manao be ny fitandremana tsirairay eny anivon’ny fokontany misy azy : (manorina sekoly, fitsaboana, fikarakarana ny sahirana …)
2. Najoro eo anivon’ny foibe ny komity samihafa Miady amin’ny SIDA, fahalovana sy ny kolikoly, ny komitin’ny fiainam-pirenena
Fantatsika tsara fa isaky ny fivorian’ny SL, dia misy hatrany ny hafatra atao ho an’ny firenena amin’ny maha mpaminany ny Fiangonana. Ny MF koa dia mampita hafatra isaky ny tapitra ny fotoam-pivoriana.
3. Fiaraha-miasan’ny Fiangonana sy ny Fanjakana
Tao anatin’ny 3 taona dia niara-niasa tamin’ny Fiangonana ny Fanjakana. Marihana fa tsy manohana ara-bola mivantana ny Fiangonana, ny Fanjakana, mba atao ho fivelomana na fampandehanan-draharaha, fa ny fanaovana asa fanorenana trano, na fanolorana fitaovana, no himasoany, na fanomezana tolotr’asa iray. Nisy ny tombontsoa azontsika tamin’izany, ohatra :
– nisy sampana nahazo tolotr’asa : afaka nahazo fitaovam-birao.
– nisy Fiangonana na toeram-pitaizana na fiofanana naorina, ohatra : Maintirano, Morafenobe, Maroantsetra, Faritr’i Vatomandry, Antsohihy.
– Toby : Ibora, Toamasina, FJKM Ambodifiakarana Tsimbazaza, Tabita Dorkasy.
– Ny foibe : Trano eo Faravohitra, Ampandrana.
– Trano PS : Tsiroanomandidy, Mandritsara, Vatomandry, Antananarivo, Antsiranana.
4. Velona ny Fiangonana amin’ny ankapobeny
Manao Tafika Masina sy asa sosialy ny isam-pitandremana. Miditra in-2 ny Fiangonana (x2 ny tafontrano).
Maro ny manitatra ny trano hiangonana, maro ny asa fanorenana (sekoly, akany, toeram-pitsaboana, trano vadim-piangonana …) Mahavelom-bolo ny miatrika ny fivorian’ny SP. Mahavory olona maro isika. E. Ny antontan’isa (Desambra 2004)
– SP	:	36
– Fitandremana	:	1392
– Fiangonana tafo	:	5795
– Kristianina	:	4 tapitrisa
– Poste d’évangélisation	:	55
– Mpitandrina	:	1053
– Sekoly	:	434
– Mpampianatra matihanina	:	646
– TPM IFRP isan’ny mpianatra	:	318
– TPM IFRP isan’ny mpampianatra	:	20
– TPM IFRP antselika, mpandraharaha	:	59
Ny Mpitandrina RADIMISAON Jonah, Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana